ကောင်းကောင်းစားကြမယ် မြန်မာ့ရိုးရာအကြော်စုံ နဲ့ အချဉ်ရည်ကောင်းကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » ကောင်းကောင်းစားကြမယ် မြန်မာ့ရိုးရာအကြော်စုံ နဲ့ အချဉ်ရည်ကောင်းကောင်း
Posted by အောင် မိုးသူ on Dec 23, 2014 in How To.. | 25 comments
စားစရာတွေကို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်လာတော့ အပြင်မှာ စားဖြစ်ရင် ဂျီးများလာတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ အားလပ်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်စားချင်တာလေး လုပ်စားဖြစ်တယ်ပေါ့။ အလုပ်ကတစ်ဖက် နားရက်ကလေးလည်း အေးဆေးနားချင်ကြ သေးတယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုနဲ့ ပိတ်ရက်မှာ လွယ်လင့်တကူး အရမ်းလည်းမပင်ပန်းတဲ့အရာလုပ်စားဖို့ ကြံရွယ်လိုက်တယ်။ အချဉ်ရည်ကောင်းကောင်းနဲ့ အကြော်စုံလုပ်စားမယ်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ မေမေ့ကို မုန့်နှစ်အတွက် ဆန်စိမ်ပေးထားပါလို့ မှာခဲ့ရတယ်။
လူဆယ်ယောက် ၊ ဆယ်ကျော် ၀န်းကျင်စာ ဆန်လေးလုံးဆို ရပါပြီ။
ဆန်စိမ်ရမယ်အထဲမှာ မတ်ပဲ ငါးကျပ်သား
ကောက်ညင်းလက်တစ်ဆုပ် ထည့်ပြီး ညဘက်ကတည်းက စိမ်ထားလိုက်ပါ။ စိမ်ထားလည်းလွယ်ပါတယ်။ နေ့လည်ဘက်စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နံနက်ကတည်းက စိမ်ထားတဲ့ဆန်ကို သွားကြိတ်ထားရပါမယ်။ မကြိတ်ခင်မှာ ထမင်းလက်ဆစ်ဆုပ်ထည့်သွားလိုက်ပါ။ ထမင်းဟာ မုန့်ကိုရွစေပါတယ်။ (ထိုအကြောင်းအား ကီးမား ခေါက်မုန့်လုပ်နည်းတုန်းက ပြောပြီးဖြစ်)
ကြိတ်ထားတဲ့မုန့်နှစ်ကို ဆော်ဒါ စတီးလ်စွန်းအသေးလေးတစ်စွန်းလောက်ကိုရေဖျော်ပြီး ဟင်းခတ်မှုန့် အနည်းငယ်နဲ့ ဆားအတော်သင့်လောက်ထည့်ပြီး မွှေပြီး ခဏနှပ်ထားပေးပါ။ ကြော်တဲ့ မုန့်နှစ်ဟာ မကျဲပါစေနဲ့ ပြီးရင် ပဲငံပြာရည် သုံးစက်လောက် ထည့်မွှေပေးပါ။ မုန့် အရောင်လှအောင်ပါ။
မုန့်နှစ်ဟာ ကြိတ်လာတဲ့အတိုင်း ခပ်ပျစ်ပျစ်သာ ကောင်းပါတယ်။ ရေမရောပါနဲ့။
ဘူးသီးကြော်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ဘူးသီးကို အချောင်းသေးသေးလေးတွေ လှီးထားပါတယ်။
ပုစွန်ကြော်စားမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းမကြီးပဲ ဘော့ချိတ်ပုစွန်လောက်ဆိုရင် စားကောင်းပါတယ်။
အားလူးကြော်ကိုတော့ ကျွန်တော်က ပြုတ်ပြီးထောင်းထားကိုမကြိုက်ပါဘူး အ၀ိုင်းလေးတွေလှီးပြီးကြော်တာကြိုက်ပါတယ်။
ပုစွန်ခွက်ကြော်ကတော့ ပဲပင်ပေါက်ရယ် ပုစွန်ထုပ်ရယ်လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုစားကောင်းတာ တို့ဖူးကြောက်ပါ။ တို့ဖူးကို စတုန်ရန်းပုံစံလေးတွေ လှီးပြီးကြော်တာ စားအကောင်းဆုံးပါ။
ဘူးသီးကြော်ကို အချောင်းသေးသေးလေးတွေလှီးပြီး မုန့်နှစ်နဲ့ကြော်တာဟာ မော်လမြိုင်ဘက်ကအတိုင်းပါ။ မုန့်နှစ်ဟာ ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အများကြီး စိမ်စရာမလိုပါဘူး ဘူးသီးချောင်းလေးတွေပေါ်မှာ မုန့်နှစ်ခပ်ပါးပါးတင်ရုံတင်ပဲ ဆီပူထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ပြောင်းဖူးချွေပြီးသားကိုတော့ ခွက်တစ်ခွက်ထဲထည့် မုန့်နှစ်အနေတော့ထည့်ပြီး ပန်းကန်ပြားအသေးတစ်ခွက်ထဲမှာ အပြန့်လိုက်စီးပြီး ဆီပူထဲထည့်ရုံပါ။ ပုစွန်ကြော်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အာလူကြော်ကောင်ပေါ့ အားလူးအ၀ိုင်းလေးဝိုင်းလောက်ဆို အနေတော်ပါပဲ။ တို့ဖူးကြော်လည်း တူတူပါပဲ။
တစ်မျိုးထူးခြားတာက ပုစွန်ခွက်ကြော်ပါ ပဲပင်ပေါက်ကို ခပ်လုံးလုံး မုန့်နှစ်ခပ်ပါးပါးတင်ရုံနဲ့ ပဲပင်ပေါက်ခပ်လုံးလုံးပေါက်မှာ ပုစွန်ထုပ်တစ်ကောင်သာတင်ပြီး ဆီပူထဲထည့်ရပါတယ်။ ပဲပင်ပေါက်ကို ကျွတ်နေအောင် ကြော်ရတဲ့အတွက် အနည်းငယ် အချိန်ကြာပါတယ်။
အကြော်မှာ အဓိက အရေးပါတာ ၂မျိုးတည်းပါ။
မုန့်နှစ်ကတော့ အထက်ပါ ပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ မတ်ပဲဟာ စိမ့်စေပါတယ်။ ကုလားပဲဟာ အချို အငံနဲ့ အစိမ့်ဘက်ကို သွားပါတယ်။ ကောက်ညင်းကတော့ အေးသွားတာတောင် ပျော့်မသွားပဲ ကျွတ်နေစေပါတယ်။ ထမင်းကြမ်းကတော့ မုန့်ကို ရွစေပါတယ်။
အချဉ်ရည်စပ်ရာမှာ ကျွန်တော်ကတော့ ငရုတ်ဆီ နဲ့ မန်ကျည်သီးကိုသုံးပါတယ်။ မန်ကျည်သီးဖျော်ပြီးသားရယ် ငရုတ်ဆီအနီရောင်ရယ်ကို အချိုးကျကျ ရောပါတယ်။ ပြီးရင် နံနံပင်ကို ပါးပါးလှီးထားပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်း အချိုးကျကျရောပြီး မညက်တညက်ထောင်းပြီး ငရုတ်ဆီနဲ့ မန်ကျည်းရည်ရောထားတဲ့အထဲကို
နံနံပင်ကော၊ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာကိုပါ ရောမွှေးပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဆားအတော်အသင့်ရယ် ငံပြာရည်အတော်အသင့်ရယ် ဟင်းခတ်မှုန့်အနည်းငယ်ရယ်ထည့်ပါတယ်။ အချဉ်ရည်ဟာ ငံပြာရည်မပါရင် ဘယ်တော့မှ စားမကောင်းပါဘူး။ အားလုံးပြီးသား အချဉ်ရည်ကို စားရင် ဗိုက်မနာအောင် ပွက်တဲ့အထိ မီးဖိုပေါ်မှာတည်ပေးပါ။ ပွက်လာရင် မွှေးလာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင် အကြော်စုံနဲ့ စားကောင်းလွန်းတဲ့ အချဉ်ရည်ကို ရပါပြီ။
ကဲ………အားလုပ်ရက်လေးမှာ မြန်မာအကြော်စုံလေး လုပ်စားကြရအောင်ဗျာ။
အယ် …. ရွာမလည်ဖစ်ဒဲ့ တောတွင်း …. ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ ချိလာတာ နာတို့ ရွာကြီး ….
ဒါ့ပုံဒေ ဘာဒေတောင် တင်လာရဲတဲ့ အထိပေါ့စ် …
ဒါနဲ့ အာ့ ညီမယေးမို့ယား
အရင် Office ကပါဗျာ။ ကျတော်က အဲ့လိုတွေ ချက်ကျွေးနေကြပါ။
နောက်ဆုံး ပုံက တစ်ယောက်က လှတယ်နော်။
သူကြော်တာ စားရရင် ကောင်းမယ်။
ဖွေးဖွေးနဲ့ အတူတူ စားချင်လိုက်တာ… (အကြော် ကြော်ပြီး)
မဆိုးဘူး… ခရစ္စမတ်နေ့အတွက် ဆွဲစိလိုက်ရ… ပဲခူးသွားမယ်ဆိုလို့ လွှတ်ပေးလိုက်မယ်…
အိမ်က သွားမှာမို့ လိုက်ကို လိုက်သွားရမှာ မလိုက်ရင် ဘီယာသောက်နေတယ်ထင်မှာ။ ခိခိ
အဲလောက်ဆိုးလား… ကိုယ့်ဗိုက်ကိုတော့ မမှီသေးပါဘူးလေ…
အဲ့အတိုင်းလုပ်မကောင်းရင် ကြိုက်သလိုသာလာပြော ဦးမိုက်ရေး)))
ယူအက်စ်မှာ.. Long John Silver’s ဆိုတဲ့ဆိုင်က.. အကြော်စပယ်ရှယ်လစ်ဗျ..။
အကြော်စုံကို.. ဆိုင်ဖွင့်ရောင်းတယ်.။ ဖရန်ချိုင်းလဲပေးတယ်…
သဂျီး ပဲရွက်တို့ မြင်းခွာရွက် တို့လည်း မုန့်နှစ်နဲ့ ကပ်ပြီးကြော်တာမျိုးလဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။
ဂျပန်တွေရဲ့.. တန်ပူရာကတေ့ာ.. အရွက်တော်တော်များများကို.. ကြော်တယ်ဗျ..။
ဒီမှာလည်း သီးစုံတန်ပူရာဆိုပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတာရှိတယ်။
ကန်စွန်းရွက်၊ အာလူး၊ ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဂေါ်ရခါးသီး၊ ငြုပ်ပွချို၊ ကြက်သွန်နီအကွင်းလိုက်လှီးထားတာ စသဖြင့် အစုံ ကြော်ထားတာ။
တစ်ခုကိုက်ရင် အရသာတမျိုးနဲ့ စားလို့ကောင်းသား။
တန်ပူရာဆိုတာ မြန်မာအကြော်နဲ့ နီးနီးစပ်စပ်ပါပဲ သူပ မုန့်နှစ်ထဲမှာ နွားနို့ သို့မဟုတ် ထောပတ်ပါတယ်ဗျ။
အာ့လေး သတိရလို့ ပြန်လာပြောတာ။ lol:-)))
ပုစွန်စာရွက်တော့် အရမ်းကြိုက်တဲ့အရွက်ထဲမှာ ပါတယ်။ ဈေးထဲမှာလည်း ရှားပါးပြီး။ တစ်ခါတစ်လေ သူနဲ့ ဆင်တူတဲ့ အဖြူပွင့်တွေပွင့်တဲ့ အပင်တဲ့ လူတော်တော်များများက မှားကြသေးတယ်။ လမ်းမှာတွေ့လို့ ပုစွန်စာရွက်တွေ့ရင် မနေနိုင်ဘူး ခူးတော့တာပဲ။း)))
မန္တလေးပဲကြော်လည်း ကျန်သေးတယ်။း)))
စလုံး က Long John silver´s ကစားလို့မ​ကောင်းဘူး။ မြန်​မာအ​ကြော်​စုံကမှပိုစားလို့​ကောင်းတယ်​။ နာမည်​ကြီးတဲ့ ဗီယက်​နမ်​ ​ခေါက်​ဆွဲစားကြည့်​တာလည်းမ​ကောင်းဘူး။ ​ကြော်​ငြာ​ကောင်း​ကောင်းနဲ့ ပါဝင်​ပစည်း​တွေသန့်​ရှင်းမြင်​သာမှုရှိရင်​ မြန်​မာအစားအစာကို လက်​ခံကြမယ်​ထင်​တယ်​။
အ​ကြော်​​တွေအများကြီး ဗိုက်​ဆာ​နေတုန်းဖတ်​မိတာပဲ။ မတ်​ပဲဆိုတာဘယ်​လိုပဲလည်းမသိဘူး။ ​ရော​နှောပြီးသားအမှုန့်​​တွေ​ရောင်းရင်​​တော့​ကောင်းသား။ Ready Made.
ကျ​နော်​စားချင်​တဲ့အ​ကြော်​ က တမျိုးတည်းရယ်​
အကြော်စုံ နဲ့ ထမင်းပူပူလေး နွေးလိုက်ရရင် ၅ ပုဂံလောက်တော့ အသာလေး။
ရန်ကုန်က အကြော်စုံ ထက် နယ်ဖက်က အကြော်စုံ တွေက ပိုစားကောင်းတာ ထင်မိတယ်။
အဖွား မြို့လေးမှာ ရွှေဖရုံသီးကြော် တို့ ဂေါ်ရခါးသီးကြော်တို့ ရတယ်။
မန်ကျီးရည် ချဉ်စပ် လေး ၊ ဆလပ်ရွက်လေး နဲ့။
အရီး တို့ အချိန်ကတော့ အင်းယား က အကြော်ကတော့ ဟန်ပြပါ။
အခုမှာတော့ ဆီကြော် တွေ က ရှောင်ဖို့အထဲ ပါနေပါရောလား။
အမေ့သားလေးက ဒီတစ်ခါ ကိုယ်ရံတော် လေး တွေ နဲ့ ပါလား။ ချစ်စရာလေးတွေ။
မင်း ပုံ ကြည့်ရတာလဲ ချာတိတ်လေးပါဘဲလား။
ဒီ အသက်လေး နဲ့ စာတွေ အတော်ရေးနေနိုင်တာ တော်လိုက်တာ။
အရင်အလုပ်မှာလေ တစ်ပတ်တစ်ခါ စနေနေ့ နေ့လည်ဆို ကျတော်က တစ်ခုခု လုပ်ကျွေးတာ ။ အဲရုံးက မီးဖိုချောင်ရှိတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။ ကိုရီးယား ထမင်းလိပ်လုပ်နည်းလေး တင်ဦးမှပဲ။
ဆီသန့်နဲ့ကြော်တဲ့ အကြော်မျိုးစားချင်လွန်းလို့တပိုင်းသေနေတာ
အခုတော့ တွေ့တဲ့အကြော်တွေပဲ မအောင့်နိုင်လို့ ၀ယ်စားနေရတယ်…
အချို့ အကြော်ဆိုင်တွေက သန့်ကြပါတယ်။ ဆီကတော့ စားအုန်ဆီပဲ သုံးမယ်ထင်တယ်။ လူများရင်တော့ တစ်ခါတစ်လေလုပ်စားတာ အကန်ုအကျသက်သာနဲ့ ကောင်းကောင်းစားရတာပေါ့။ ပင်ပန်းတာလေးတာ့ ရှိတယ်။